Biography na ụkpụrụ nke Geology nke Nicolas Steno | Netwọk Mgbasa Ozi
Geology nwere ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị jisiri ike mee nchọpụta na-awụ akpata oyi n'ahụ nke gbanwere ụzọ anyị si ahụ ụwa anyị. Otu n'ime ndị ọkà mmụta sayensị a bụ Nicolas Steno. O doro anya na ọ bụrụ na ị gụrụ akwụkwọ banyere geology na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ị ga-anụ banyere nwoke a. Nke a bụ ezigbo nwoke Renaissance nke jisiri ike chọpụta ọtụtụ ihe dị mkpa gbasara sedimenti na nhazi ala nke ụwa anyị.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị akụkọ ndụ Nicolás Steno na-akọwapụta ọrụ ya kachasị mkpa ma kọwaa ihe ọmụma o nyere na geology.
1 Mmalite ya
2 Ihuigwe na Florence
3 Nicolás Steno dị ka nna nke Geology
4 Kpụrụ Steno
Nwoke a na ndi mmadu bi nso mgbe nile ka ndi na eche banyere ihe kariri otu aka oru. Di ka onye obula, mgbe mmadu na-amu ihe, o buzi oka aka n’ulo oru ka o burukwa onye oka mmuta ma nwekwuo omuma banyere ya. N'okwu a, ma Steno na ndị ya na ha na-emekọ ihe kwa ụbọchị dọọrọ uche gaa n'ọtụtụ ọzụzụ dị iche iche.
Steno abanyeghi na geology, kamakwa n'ime ogwu, dentistry, omumu nke anumanu oge ochie, sharks, wdg. Ekwesịrị ịkọwa ya na n’oge ochie ọ dị mfe ịmụ alaka dị iche iche ebe ọ bụ na enweghị obere ihe ọmụma na nke ọ bụla n’ime ha. Taa, ị gaghị enwe ike bụrụ ọkachamara ma ọ bụ n'otu ngalaba, ị ga-achọ ọtụtụ ndụ iji nwee ike ịmụ ihe niile gbasara ọtụtụ ọzụzụ n'otu oge.
Agbanyeghị, ọ bụ ezie na taa ị nweghị ike ịmụ ọtụtụ ọzụzụ n'otu oge na omimi, enwere ike iduzi gị site n'ịchọ ịmụtakwu ihe ndị ọzọ na-abụghị ọkachamara gị ma nwee ike ịchebe onwe gị n'akụkụ niile. Ọ bụ ịchọ ịmata ihe mere m ji chọpụta ihe dị iche iche na geology.
Akụkọ banyere Nicolás Steno malitere na Florence. Ebe ọ bụ dọkịta wee biri na a omume mgbe ọtụtụ afọ nke na-amụ nkà mmụta ọgwụ na Western Europe dum. Ọ nọ na-enyocha ọdịdị nke akwara ma chọpụta gland nke na-amabeghị tupu oge ahụ. Gland a n'isi ndị na-enye nwa ara ka akpọrọ "ductus stenonianus" n'aha ya.
Ihuigwe na Florence
N'oge ahụ, Steno kwagara Florence na 1665 iji nwee ike isonyere Grand Duke nke Tuscany wee si otú a na-akpọkọta "Cabinet of curiosities." Ọ bụ maka imeju ime ụlọ dị iche iche na ihe dị iche iche dị iche iche dịka nchịkọta na ihe ndị ọzọ. Ọ dị ka ọ dị a obere ngagharingosi ngosi na eke ihe ngosi ma ọ bụ nchịkọta ụlọ nke a mahadum ngalaba.
Steno gara n'ihu dee ma chọpụta ọtụtụ ụdị anụmanụ, osisi na mineral nke ụdị dị iche iche. Ugbua na mineral ọ malitere inwe ihe ọmụma banyere geology, ebe ọ bụ na nghọta ya na-etolite.
N’afọ 1666, ụfọdụ ndị ọkụ azụ̀ jisiri ike gbalịa ijide nnukwu azụ̀ azụ̀ dị ukwuu. Mgbe o kesasịrị ya ka ọ nwee ike ibufe ya nke ọma, Nicolás Steno debere isi ya iji mụọ ya nke ọma. Site na nyocha ya na nyocha ya na azu shark, Steno choputara nke a enwere ụfọdụ ihe okwute a na - akpọ glossopetrae nke achọtara n’elu okwute ụfọdụ.
Scholarsfọdụ ndị ọkà mmụta chere na nkume ndị a si n’eluigwe ma ọ bụkwanụ si n’elu ọnwa daa. Ndị ọzọ chere na okike na-etolite na okwute site na okike ma na-etolite oge. Otú ọ dị, echiche ndị a enweghị isi na sayensị anyị. O chere na glossopetrae dị ka ezé shark n'ihi na ha dị n'ezie ma ọ dị.E debere ha n'elu nkume mgbe oke osimiri kpuchiri ha.
Nicolás Steno dị ka nna nke Geology
N'oge ahụ, Steno a chọrọ bụ echiche dịpụrụ adịpụ kpamkpam. Kedu ka oke nkume ga-esi buru oke osimiri? Ọ bụrụ na ọkpụkpụ ndị ahụ bụbu ọkpụkpụ, kedụ otu a ga-esi chekwaa ya n’otu ụzọ ahụ n’ime nkume? A siri ike dị ka ezé shark ezé enweghị ike ịbụ n'ụzọ dị mfe njikọta na nkume nke ọzọ siri ike.
Ọmụmụ ihe ndị a were ya afọ atọ ma kwubie na ihe niile ụdị nkume ọ bụ ha kpụrụ ha usoro ime ka ihe sie ike ma mee gburugburu ma obu n’elu ohia. Nke ahụ bụ, nkume ọhụrụ ahụ gafere ochie ochie ahụ, yabụ na a ga-enwerịrị akwa dị larịị ma ọ bụ eriri dị n ’ụwa.
Nke a bụ otú echiche a banyere Nicolás Steno si nye aka na nkọwa kachasị mkpa banyere nkà mmụta ala. Ngwurugwu kachasị elu bụ nke oge a karịa nke miri emi. Ka ị na-egwu ala ma ọ bụ na-abanyekwu omimi, afọ nke nkume ahụ emewo agadi. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na akụkụ ndị ọzọ fọdụrụ na-agafe na oge nke oge na nkwụnye ego nke ọhụụ ọhụrụ na nkwenye ha na-esote.
N'ihi echiche a, oge dị iche iche n'oge ụwa nwere ike ịdị iche. Approachzọ a nwere ike ime ka ndị ọkà mmụta sayensị nweta nkwubi okwu banyere oge gara aga na-adabere na nkume ochie dị na-adabere na omimi ha. Ọganihu Nicolás Steno nyere oyi akwa di nkpa na imuta obodo ndi mmadu, dinosaurs, na obuna mgbanwe nke ihu igwe nke dịrị n'oge dị iche iche nke akụkọ ntolite ụwa.
Ná ngwụsị nke ndụ ya, Steno hapụrụ ndụ dum raara onwe ya nye sayensị iji banye n'okpukpe. A họpụtara ya bishọp na 1677 na ụkọchukwu ndịozi nke ugwu Germany na Scandinavia.
Agbanyeghị, ọ hapụrụ ụkpụrụ nke geology nke ị nwere ike iji mata ọtụtụ ihe banyere ụwa.
Kpụrụ nrịba ama nke mbụ. Ejiri eriri ahụ guzo ọtọ. Ngbanwe ndi ozo nile bu n'ihi ogba aghara ndi ozo.
Ofkpụrụ nke nhazi nke usoro. O n’egosi na usoro ihe omumu banyere ala nke mere n’oge gara aga nwere otu ososo ma ihe mere n’otu uzo taa.
Continukpụrụ na-aga n'ihu n'ihu. Stati ahụ na-agbasa n'akụkụ niile ruo ebe nkwụnye ego.
Enwere m olileanya na ozi a ga-enyere gị aka ịmatakwu banyere Nicolás Steno, bụ nna nke Geology.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Nicolas Steno
Ọ bụ Silvia Santos dijo
Edemede mara mma German, daalụ.
Ọ ga-amasị m ịmata ụbọchị ị bipụtara ya. Cheers
Zaghachi Silvia Santos